I-Slack iyayitshintsha i icon kwi-app yayo yezixhobo eziselfowuni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Olunye utshintsho kwilogo yeSlack: ngeli xesha imvelaphi emhlophe
El Utshintsho lwamva nje olwenziwe liqela loyilo lweSlack Sekube kukusebenzisa imvelaphi emhlophe endaweni yobumnyama esele siyiqhelile.
Ukuba sele ubangele ulwaziso olutshintshayo kwi-Twitter, nge uninzi lwezithuba zoluntu egxeka uyilo lwe logo entsha phantsi nje kweenyanga ezimbini ubudala, ngoku ufeze okufanayo.
Okokugqibela uhlaziyo kuyilo lwe logo ye-Slack Utshintsho kwinto umbala wakho ongasemva oya kuba yiyo kwi-icon yesoftware. Ngoku isukile kuloo mfusa umnyama yaya kumhlophe qwa.
Ukuqala namhlanje, unokuqaphela utshintsho lwakho lwe-Slack yesoftware olusuka emfusa lube mhlophe. Oku kuya kwenza ukuba kube lula ukubona kwisixhobo sakho. Ndwendwela iGoogle Play okanye iVenkile yeApple yokuhlaziya.
Slack (@SlackHQ) Februwari 26, 2019
KwakungoJanuwari xa i-logo eyenziwe yahlaziywa kakhulu liqela elinye loyilo lweSlack, nangona libambene noMichael Bierut kunye nePentagram. Oku kukhokelele kukugxeka okuvela kuluntu "oluthiyileyo" iqumrhu elitsha lesinye sezixhobo zonxibelelwano ngobuchule namhlanje.
Injongo yayikukuzivelela kwelogo, njengoko kusenzeka ngophawu olwenziweyo iya ikhula ngokukhula ixesha elidlulele. Olu luyilo luqhubekile ngemibala efanayo, nangona kukho utshintsho kwiimo zejometri ezenza ilogo yeSlack.
Las ukugxeka ukusetyenziswa komhlophe kumbala ongasemva Zisekwe kwinto yokuba ngoku kunzima ngakumbi ukwahlula iSlack kwezinye iiapps kwiselfowuni. Kuyinyani, ngakumbi ukuba siyithelekisa nenye into enkulu yeG efana neeFoto zikaGoogle kwaye inezinto ezininzi ezifanayo.
Omnye usetyenziso lweselfowuni oluhlaziywa ngombala omtsha omhlophe yengxowa-mali nalapho kuya kuba nzima ngakumbi ukwahlulahlula. Nangona kungazukuthatha thuba lide ukuba siqhelane nayo ukuqhubeka nokuyisebenzisa njengoko ibisenzeka ukuza kuthi ga ngoku; bambalwa abaya kuba ngabasebenzisi abayishiya ngenxa yotshintsho lobuhle okanye phantse bangabikho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Olunye utshintsho kwilogo yeSlack: ngeli xesha imvelaphi emhlophe
Yenza ubugcisa bepop ngamanyathelo ambalwa alula
Yenza imandala ngokulula ngesixhobo